Ciidamada Kenya Oo toogasho ku dilay 2 askari Soomaali ah xilli ay kasii Firxanayeen deegaanka Faafaxdhuun ee gobolka Gedo.
Sunday March 03, 2019 - 09:10:07 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wararka ka imaanaya gobolka Gedo ayaa sheegaya in ciidamada gummeysiga Kenya ay toogasho ku dileen maleeshiyaad katirsanaa Dowladda Federaalka oo ay iskala firxadeen deegaanka Faafaxdhuun.
Wariye ku sugan gobolka Gedo ayaa soo sheegay in is rasaaseyn kooban ay labada ciidan ku dhaxmartay meel 25Km ujirta deegaanka Faafaxdhuun, ciidamada Kenya ayaa ka shakiyay maleeshiyaadka Soomaalida dabadhilifyada ah waxayna ku eedeeyeen in ay wax ka ogaayeen qaraxyo is xigxigay oo qabsaday Meleteriga Kenya.
Ugu yaraan 2 askari ayaa la xaqiijiyay in laga dilay maleeshiyaadka Soomaalida halka ciidanka Kenya uu dhaawac kasoo gaaray hal askari "melleteriga Kenya waxay dileen laba kamid ah maleeshiyaadkii kaba qaadka u ahaa todobadii sano oo ay ku sugnaayeen gobolka Gedo, sababta ay udileen waxay aheyd kala shaki kadib markii afar qarax Kenyaatiga oo kaliya lala helay ayay caroodeen oo ay toogteen kuwii iyaga la socday" sidaas waxaa yiri qof Gedo ku sugan.
Waxaa la sheegaa in ciidamada gummeysiga dowladaha Kenya iyo Itoobiya aysan kala jeclayn askariga Soomaaliga dabadhilifka ah ee iyaga la shaqeeya iyo xoogagga kasoo horjeedda ee la dagaallamaya waxayna Soomaalida dhammaanteed ka aaminsanyihiin Cadow.
Lama oga masiirka maleeshiyaadka dowladda ee ku sugan deegaanka Buusaar ee lafilayo in ay isaga baxaan ciidamada Kenya, Sheekh C/Caziiz Abuu Muscab oo ah Afhayeenka ciidamada Al Shabaab ayaa ugu baaqay ciidamada DF-ka ee Gedo ku sugan in ay Alle utowbadkeenaan ayna ka haraan ciidanka gummeysiga Kenya.